သမီးက ကလေးရှိသေးတယ် ဆိုတဲ့ KTV က ၁၆ နှစ်မလေး – Tameelay
ကောင်မလေးကလည်း အကြိမ်​ကြိမ်​ငြင်းဆို​နေတာ​ပေါ့ !
”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက…ခလေးရှိသေးတယ်”
ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို ဘယ်ပုဒ်မတွေမဆို ငွေနဲ့ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း နွားအို မြက်နုကြိုက်တာ အစဉ်အလာဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုကာ ဒူးထောက်၍ လက်ထပ်ခွင့်တောင်း​နေ ပြန်​တယ်​ !
ကောင်မလေးကလည်း “ငရဲတွေကြီးပါ့မယ် ဦးရယ်…မီးက တကယ် ခလေးရှိပါ သေးတယ်”ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုနေ​တော့…ဘောစိဦးလေးကြီးလည်း …“မီး​လေး​ရေ …ရှေ့ရေးစဉ်းစား​လေ” ..ဆိုပြီးအမြဲ နားပူနားစာလုပ်​​နေတယ်​ !
နောက်ဆုံးတော့ မီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်း ဘောစိဦးလေးကို….မငြင်းသာမလှုပ်သာပဲ လက်ထပ်ဖို့သဘောတူလိုက်​တယ် !
ကောင်မလေးက..ဦးနဲ့လက်ထပ်ပြီးရွာကို ခဏ ဆိုပြီးပြန်သွားတာပေါ့ !ဦးလည်း လွမ်းကာကျန်ရစ်ခဲ့တယ်​ !
နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့ ကောင်မလေး ဦးဆီကို ပြန်​ရောက်​လာတယ် !
ကောင်မလေး(ခေါ် )မီးရဲ့ ဘယ်ဘက်​လက်မှာ တစ်​နှစ်အရွယ် ခလေး​လေးတစ်ယောက် ချီပိုးပြီးပါလာတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ဘောစိဦးလေးကြီးကဘယ်သူလဲ ​မေးတာပေါ့ !
ဘောစိကြီးလည်း အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှော့ဖြစ်ပြီး နန်းတော်ဆေးရုံ​ရောက်​ရှာ​ပေါ့ !
0ိာန်​ 🙂 0ိာန်​ 🙂
ကောငျမလေးကလညျး အကွိမျ​ကွိမျ​ငွငျးဆို​နတော​ပေါ့ !
”ဦးရယျ မဖွဈနိုငျပါဘူး ခုမီးက…ခလေးရှိသေးတယျ”
ဘောစိ ဦးလေးကွီးလညျး” မီးကိုသာရမယျဆို ဘယျပုဒျမတှမေဆို ငှနေဲ့ဖွရှေငျးမညျဖွဈကွောငျး နှားအို မွကျနုကွိုကျတာ အစဉျအလာဖွဈကွောငျး” ပွောဆိုကာ ဒူးထောကျ၍ လကျထပျခှငျ့တောငျး​နေ ပွနျ​တယျ​ !
ကောငျမလေးကလညျး “ငရဲတှကွေီးပါ့မယျ ဦးရယျ…မီးက တကယျ ခလေးရှိပါ သေးတယျ”ဆိုပွီးအကွိမျကွိမျငွငျးဆိုနေ​တော့…ဘောစိဦးလေးကွီးလညျး …“မီး​လေး​ရေ …ရှရေ့ေးစဉျးစား​လေ” ..ဆိုပွီးအမွဲ နားပူနားစာလုပျ​​နတေယျ​ !
နောကျဆုံးတော့ မီးဆိုတဲ့ကောငျမလေးလညျး ဘောစိဦးလေးကို….မငွငျးသာမလှုပျသာပဲ လကျထပျဖို့သဘောတူလိုကျ​တယျ !
ကောငျမလေးက..ဦးနဲ့လကျထပျပွီးရှာကို ခဏ ဆိုပွီးပွနျသှားတာပေါ့ !ဦးလညျး လှမျးကာကနျြရဈခဲ့တယျ​ !
နှဈရကျသုံးရကျနတေော့ ကောငျမလေး ဦးဆီကို ပွနျ​ရောကျ​လာတယျ !
ကောငျမလေး(ချေါ )မီးရဲ့ ဘယျဘကျ​လကျမှာ တဈ​နှဈအရှယျ ခလေး​လေးတဈယောကျ ခြီပိုးပွီးပါလာတယျ။
အဲ့ဒီမှာ ဘောစိဦးလေးကွီးကဘယျသူလဲ ​မေးတာပေါ့ !
ဘောစိကွီးလညျး အဲ့ဒီနရောမှာပဲရှော့ဖွဈပွီး နနျးတျောဆေးရုံ​ရောကျ​ရှာ​ပေါ့ !
0ိာနျ​ 🙂 0ိာနျ​ 🙂
(ရှူး​ပေါက်​ပြီးမှ ဖတ်​ပါဗျို့)……. သာ​အေးသို့​ပေးစာ (အတိုအထွာ) “ကိုသာ​အေး” “​ဟေ ဘာလဲမိန်းမ” “ရွာက ရှင့်​ညီမဆီက စာလာတယ်​” “ဟာ ပြဿနာပဲ။ ငါ့မျက်​မှန်​ကွဲ​နေတာ အသစ်​မလဲရ​သေးဘူး။ ဒီလိုလုပ်​ကွာ မင်းငါ့ကိုဖတ်​ပြ” “မဖြစ်​နိုင်​ပါဘူး​တော်​။ ရှင့်​ညီမက စာ​ရေးရင်​ ​တောင်​တစ်​လုံး၊​ မြောက်​တစ်​လုံး။ ကျမကလည်း သူငယ်​တန်းစာ​တောင်​ နှာနှပ်​သင်​ထားရတာ” “ငါက …
ရယ်စရာ ဟာသ အတိုလေးပါ…ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ဘဝအမောတွေ ပြေနိုင်ကြပါစေ….
“ယောက်ျားရေ ကျမ ဓမ္မတာ မလာတာ တစ်လကျော်နေပြီတော့” “အဲဒါနဲ့မနက်က သားဖွားဆရာမလေးကိုသွားပြတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိတာလို့ပြောတယ်။ ကျုပ်တို့တော့ သားဦးလေးရတော့မယ် ထင်တယ်နော် ယောက်ျား” “ဟာ ဒါဆိုပျော်စရာကြီးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်မှသေချာမှာဆိုတော့ အဲဒီအကြောင်း ဘယ်သူ့မှမပြောနေနဲ့ဦးနော်” “အင်းပါ ယောက်ျားရဲ့” နောက်တနေ့မနက်မှာ လျှပ်စစ်မီတာရုံးက မီတာကြေးမဆောင်လို့ သတိပေးတဲ့ ဖုန်းဝင်လာသည်။ …
Mobile game နဲ့ ချစ်​သူ
“ကိုကို ကျွဲပါးစောင်းတီး ဆိုတာ ဘာပြောတာလဲ” ဟန့် Mobile Legends ဆော့ နေပါတယ်ဆို ဘာတွေ လာမေး နေလဲ မသိဘူး “ကျွဲရဲ့ ပါးကို စောင်းလုပ်ပြီး တီးတာလေ” “အော.. အော်.. အဲ့တာကြောင့် နေမှာနော် ကျွဲပါးတွေက အကြီးကြီး” ငင့် ဘာမှလဲ …